ဟာသ – Myitter
ဒီတခါတော့ ကားဆရာတွေခံလိုက်ရပြီ… 😁 ဖြေးဖြေးမောင်းပါ ဒရိုင်ဘာရယ်….. သီတာရင်တွေတုန်လွန်းလို့ပါ…. . . . . . .
February 26, 2018 Myit Ter 0
ဒီတခါတော့ ကားဆရာတွေခံလိုက်ရပြီ… 😁 ဖြေးဖြေးမောင်းပါ ဒရိုင်ဘာရယ်….. သီတာရင်တွေတုန်လွန်းလို့ပါ…. . . . . . . မသီတာ ခုံနံပါတ်​ ၁ ဆရာတော် ဦးနန္ဒိမာ မြစ်ကြီးနားကနေ မုံရွာမန္တလေးဘက် ခရီးသွားစရာ ရှိ၍ ကားလက်မှတ် ဖြတ်ထားခဲ့သည်။ ဘုန်းကံအရှိန်အဝါပဲ နည်းလို့လား၊ […]
ကြော်ငြာ မင်းသမီး လှတောသူ မရှယ်ခိုင် ရဲ့ ကြော်ငြာ အိုက်တင်များ..အားပေးကြလားလို့..
February 25, 2018 Myit Ter 0
အကို ဆရာကိုဒိန်းဒေါင်ကို ဦးထိပ်ထားပီး အကိုသွန်သင်ညွန်ပြမှုအောက်ကနေပီးကျနော် လှတောသူမရှယ်ခိုင်ကို ထာဝရ ပိုးထည်ဆိုင် ကြော်ငြောလေးကို ဒါရိုက်တာ လုပ်ပီးကြိုးစား ထားပါတယ်ခင်ဗျာ… Min Htike – ဝမ်းစတား မင်းထိုက် အကို ဆရာကိုဒိနျးဒေါငျကို ဦးထိပျထားပီး အကိုသှနျသငျညှနျပွမှုအောကျကနပေီးကနြျော လှတောသူမရှယျခိုငျကို ထာဝရ ပိုးထညျဆိုငျ ကွျောငွောလေးကို […]
တပည့်လည်တယ်ဆိုတာ ဆရာအိပ်နေသလောက်ပဲ ရှိပါတယ်
February 16, 2018 Myit Ter 0
တပည့်လည်တယ်ဆိုတာ ဆရာအိပ်နေသလောက်ပဲ ရှိပါတယ် တစ်ခါက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးယောက်ဟာ စာမေးပွဲမဖြေခင်ညမှာ စာမကျက်ပဲ လျှောက်လည်နေကြသတဲ့။သူတို့ဟာ မနက်လင်းခါနီးမှ အဆောင်ပြန်ရောက်ပြီး စာလည်းတစ်လုံးမှ မကျက်ရသေးတာကြောင့် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ အကြံထုတ်နေတော့တာပေါ့။အဲဒီအချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ဝိုင်းပြီး အကြံတစ်ခုထုတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရွှံ့တွေလူးပြီး မောပန်းနေတဲ့ပုံ ဖမ်းကာ ပါမောက္ခကြီးဆီကို သွားတော့တာပေါ့။ “ဆရာကြီး ကျွန်တော်တို့ […]
စစ်တပ်ကနေထွက်ပြီး ရဟန်းဝတ်တာ သုံးရက်သာရှိသေးတဲ့ “တောဘုန်းကြီး” အခုတော့ အကြီးအကျယ် အခက်တွေ့…။
ဒီနေ့ ကိုယ်တော်တစ်ပါးက ကျောင်းအတွက်အလှူခံ ရန် မြို့သို့ကြွသည်။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးက ထိုကိုယ် တော်အစား ဆွမ်းခံကြွရန် အမိန့်ရှိသည်။ ရှင်ဇနိတ မငြင်း ရဲ။စစ်တပ်မှာဆိုရင် မလုပ်နိုင်လျှင် သတင်းပို့။ ဖြစ်သေးသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တော့မရ။ ကြိမ်လုံးနှင့် တင်ပါး နှစ်ပါးသွား ကရမည်။ မကရလျှင်တောင် အနည်းဆုံး ပုံးကြောင်(ထမင်းငတ်)လိမ့်မည်။ […]
ကျောင်းဆရာမအပျိုကြီးနဲ့ ကိုရင်နဲ့ တွေ့ကြလေသောအခါ
January 3, 2018 Myit Ter 0
ဖေ့ဘုတွင် လွန်စွာမှအန္တရာယ်ရှိသောကိစ္စရပ်ကြီး ဖတ်ပြီး ရှယ်ပေးပါ
January 2, 2018 Myit Ter 0
​ ​ဖေစ့်​ဘုတ်​မှာ ကျနော့်ကို လူတစ်ယောက်ကလာ Add သဖြင့် ကျနော် လက်ခံထားလိုက်သည် ည ၁၂ နာရီကျော်လောက်ကျတော့ ထိုလူက ကျနော့်ကို Messenger မှ စကားလာပြောသည် ထိုလူ – Hi☺ ကျနော် – ဟုတ်😌 ထိုလူ – မအိပ်သေးဘူးလား😄 […]
၈ နှစ်ရှိသေးတဲ့ကလေးလက်ကမျင်းလို့အဝတ်လာလျှော်နေတဲ့ ‘…..’ဗိုက်ကြီးသည့်ဖြစ်ရပ်..
December 22, 2017 Myit Ter 0
“တောက်…! ကစားစရာရှားလို့ကွာ…ခုတော့မိအေးဗိုက်ကြီးပြီ ” “((ရွှမ်း)) ((ရွှမ်း))” “ဟင် မှတ်ပြီလား နောက်အဲ့လို ယုတ်မာအုံးမလား အင်းကွာ အင်းကွာ” “ဟီးး အောင်မလေး ကြောက်ပါပြီ ဖေဖေရဲ့ နောက် သားမလုပ်တော့ပါဘူး ဟီးးအီးး” “ဘာ!!နောက်မလုပ်တော့ဘူး ဟုတ်သလား နောက်လုပ်လို့လဲမရတော့ဘူးကွ အတတ်ဆန်းတွေ တတ်နေတယ်ဟုတ်လား ဟေ အင်းကွာ […]
မြန်မာကွ ဒါ မျိုး လာကြောလို့တော့ ဘယ်ရမလဲ
December 8, 2017 Myit Ter 0
အမေရိကန် တိုးရစ် တစ်ယောက် မြန်မာပြည် သို့ ရောက်လာခဲ့ ပြီးနောက် Taxi တစ်စီး ငှားစီး လေသည် ။ Driver ကတော့ မြန်မာလူမျိုး ပေါ့တံတား တစ်ခုနား ရောက်တော့ တိုးရစ်ကြီးက ” အဲ့တာ ဘာ တံတားလဲ ” […]
December 7, 2017 Myit Ter 0
ဖာသည်အလိုရှိသည် နန်းတော်ရှေ့မှာ သစ်သားပြားတစ်ချပ်ပေါ်မှာ ပေါ်ဦးက စာရေးပြီး ကပ်ထားတာကို ဘိုးတော်မင်း စိတ်ဝင်စား သွားတယ်။ “ဟဲ့ … ငပေါ်ဦး … မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ငါ့နန်းတော်ရှေ့ ယုတ်မာတဲ့စကား ဘာကြောင့်များ ရေးထားသလဲ” “မှန်လှပါ … ဘာကများ ယုတ်မာပါလိမ့်ဘုရား” “ဖာသည်အလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့စကား … ကြားလို့မှ […]